ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကြင်နာနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၄) ချက် - Lifestyle Myanmar
သင့်ကို လွယ်လွယ်နဲ့ မြန်မြန်အိပ်ပျော်နိုင်စေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း (၅) ခု
မနက်ခင်းမှာ ကော်ဖီအရင်သောက်မယ်ဆိုရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ?
သင့်ကို ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလာစေမယ့် အမူအကျင့် (၆) မျိုး
သူတို့ဘာသာ ငွေရှာခဲ့ကြတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က အချမ်းသာဆုံးကလေး (၁၀)ယောက်
Sociopath တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? Sociopath တစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး(၈) ချက်
နံနက်ခင်းမှာ အိပ်သင့်တာထက် ပိုအိပ်မိစေတဲ့ အကျင့်(၁၀)ခု
သာယာလှပတဲ့ ကမ္ဘာကြီးအဖြစ် တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် လူတိုင်းလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်း (၇)ချက်
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေး (Psywar) ရဲ့ နည်းဗျူဟာတစ်ချို့
ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ အောင်မြင်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကျင့်ဆိုးများ
ကိုယ်အလေးချိန်ကျချင်တဲ့သူတွေ ဝိတ်မြန်မြန်ကျစေဖို့အတွက် ရေသောက်သင့်တဲ့ အကောင်းဆုံးအချိန် (၅) ချိန်
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိခဲ့သော ကျောင်းသားတွေရဲ့ ကိုးရိုးကားယားနိုင်သော ထူးထူးခြားခြားဆန္ဒဖော်ထုတ်မှု (၅) ခု
in Lifestyle, Lotaya
၁။ သင်ကိုယ်သင် မကြာခဏခွင့်လွှတ်ပါ
ခွင့်လွှတ်ခြင်းက သင့်ဘဝမှာ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အကောင်းဆုံးနှင့် အခက်အခဲဆုံးအရာဖြစ်ပေမယ့် ၎င်းက တကယ်အစွန်းထက်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မကြာခဏဝေဖန်တတ်ကြပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ခွင့်လွှတ်ဖို့ကျတော့ ခက်ခဲနေတတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေနှင့် မိသားစုတွေကို ကျွန်မတို့က အလွယ်တကူ ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ် အပြစ်တင်သလိုမျိုး ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကို အပြစ်တင်မယ်ဆိုရင် သင့်သူငယ်ချင်းက ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ခွင့်လွှတ်တတ်အောင် ကြိုးစားပါ။
၂။ ကိုယ့်ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုရာကျန်းမာရေးတွေကို ဂရုစိုက်ပါ
သင်အကြိုက်ဆုံးပန်းခြံ (သို့) အိမ်နီးချင်းတွေဆီ လမ်းလျှောက်ထွက်ပေးပါ။ စနေနေ့မှာ ယောဂသင်တန်းသွားပါ။ ကိုယ်သဘောကျတဲ့ အားကစားခန်းမတစ်ခုခုနဲ့ ချိတ်ဆက်ပါ။ ကျွန်မတို့ စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အခါ ကျွန်မတို့ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်တွေနဲ့ တောင့်ခံထားဖို့ လိုအပ်သလို အရုပ်ကြိုးပြတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်း စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်နေဖို့ လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် တရားထိုင်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ကို ဖျော်ဖြေပေးနိုင်မယ့်အရာတွေကိုလည်း စိတ်ဝင်စားကြည့်ပါ။ စိတ်ကျန်းမာနေမှ ရုပ်ရည်ကြည်လင်မှာဖြစ်တာကြောင့် စိတ်ကျန်းမာရေးရော၊ ရုပ်ကျန်းမာရေးကိုပါ ဂရုစိုက်ပါ။
၃။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အသိအမှတ်ပြုပါ
ကျွန်မတို့က ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အတွက် အချိန်ပေးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆုချပေးပါ။ ကျွန်မတို့တွေက တစ်ခြားလူတွေအတွက် ဆုတောင်းပေးဖို့၊ အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့သာ သတိရနေကြပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မေ့နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုတစ်ခုရပြီးတိုင်း တစ်ခြားလူတွေကိုယ့်ကို ချီးမြှင့်တာတွေထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဦစားပေးအသိအမှတ်ပြုပါ။ ချီးမြှင့်ပါ။
၄။ ကောင်းကောင်းအနားယူပါ၊ အားပြန်သွင်းပါ
ကျွန်မတို့တွေက ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတွေကို ကိုးကွယ်တဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာ နေထိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ ၎င်းဆီကနေ စွမ်းအင်တစ်ခုခု၊ ခွန်အားနှင့် အသိဉာဏ်တစ်ခုခု စတဲ့ဘယ်အရာမှ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းအားမရှိဘူးဆိုရင် အသုံးမကျတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အသုံးမကျသူလို့ လက်ခံထားသူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကြင်နာဖို့ဆိုတာ တော်တော်လေးမဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးပါ။ ဒါ့ကြောင့် လူတစ်ယောက်ဟာ အသုံးကျဖို့ လိုအပ်သလို အသုံးချခံရပြီးရင်လည်း အားပြန်သွင်းဖို့ လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ဘဝမှာ ရိုးရှင်းစွာ အသုံးချခံပါ။ ကောင်းကောင်းအနားယူပါ။
အိပ်စက်ခြင်းကလူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းနဲ့ခေါင်အုံးနဲ့ ထိတာနဲ့ တန်းအိပ်ပျော်သွားတဲ့သူတွေရှိသလို အိပ်ယာပေါ်ရောက်နေတာတောင် ဟိုလှည့် ဒီလှည့်၊ ဟိုတွေးဒီတွေး၊ တော်တော်နဲ့အိပ်မပျော်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ အဲ့လိုညဘက်တွေမှာ အိပ်မပျော်ရင် နောက်တစ်နေ့မှာလည်း မျက်ကွင်းကညှိ Panda Eyeဖြစ်၊ အိပ်ရေးမဝလို့ စိတ်ကမကြည်နဲ့ အားအင်ကုန်ခမ်းသလိုခံစားရပြီး...
နီဗားဒါး-ရီနိုတက္ကသိုလ်မှ သုတေသီတစ်စုက ကော်ဖီမှုန့်တွေကို ဇီဝလောင်စာအဖြစ် သုံးနိုင်တာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်၊ မဝေးတော့တဲ့ အနာဂတ်မှာ ကားအငွေ့တွေက လက်ဆက်တဲ့ ကပ်ပချီနိုကော်ဖီတစ်ခွက်နံ့နဲ့တောင် တူနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် နံနက်ခင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ သောက်သုံးတဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်ဟာ တစ်နေ့တာကို စတင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူ။...
လူတစ်ယောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိမရှိဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ရုပ်အသွင်အပြင် ပုံပန်းသဏ္ဏန်နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ ပြောချင်တာက သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ဝနေလို့၊ ပိန်နေလို့၊ ရုပ်ဆိုးနေလို့၊ စတိုလ်က ဂွမ်းနေလို့ အစရှိသဖြင့် ဒီလိုအပြင်ပိုင်း ပုံပန်းသဏ္ဏန်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ် မရှိဘူးဆိုတာ သင့်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ သင့်ရဲ့အပြုအမှု၊ သင့်ရဲ့ပုံစံပေါ်မှုတည်ပြီး...
အောက်ပါကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချက်အလက်တွေဟာ Sociopath တစ်ယောက်ရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ အရှက်တရားကင်းမဲ့ခြင်း Sociopaths အများစုဟာ ညစ်ညမ်းသော လုပ်ရပ်တွေကို ကျူးလွန်နိုင်ပြီး နည်းနည်းလေးတောင် နောင်တမရတတ်ကြသူတွေပါ။ အပြုအမူတစ်ချို့ကတော့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုများ (သို့) တစ်ခြားလူတွေကို လူသိရှင်ကြားအရှက်ခွဲခြင်းတွေကို ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ...